191 Qof oo Imtixaan u galay laba jago oo ka bannaan Wasaaradda Qorshaynta iyo baaxadda shaqo la’aanta Somaliland | Berberanews.com
Home WARARKA 191 Qof oo Imtixaan u galay laba jago oo ka bannaan Wasaaradda...
191 Qof oo Imtixaan u galay laba jago oo ka bannaan Wasaaradda Qorshaynta iyo baaxadda shaqo la’aanta Somaliland
Hargeysa-(Berberanews)- 1991 Qof oo Dhalinyaro reer Somaliland ah ayaa markii ugu horreysay maanta hal mar u wada fadhiistay imtixaanka laba jago oo ka bannaan Wasaaradda Qorshaynta Qaranka Somaliland, ka dib markii dhawaan ay Warbaahinta ka naadisay inay u baahan tahay.
Hay’adda shaqaalaha dawladda Somaliland ayaa maanta Imtixaan ka qaaday 191 qof oo u tartamaya 2 Boos oo ka bannaan Wasaaradda Qorshaynta Somaliland, kuwaas oo kala ah Xoghaynimo iyo soo dhaweeye (Receptionist), Wasaaraddu naadisay. waxaanay dadka tirada badan ee Imtixaankan labada boos u fadhiistay isugu jireen Wiilal iyo Gabdho safaf dhaadheer ugu jira siday imtixaanka labadaa jago ugu fadhiisan lahaayeen, kuwaasoo u badnaa ardayda Jaamacadaha dhammaystay, isla markaana mid weliba ku rejo weyn yahay inuu isago ama iyadu noqoto qofka ku guulaysta labada boos qofba ka uu u tartamayo.
“Waxaannu maanta hay’ad ahaan imtixaan ka qaadaynaa 191 qof oo u kala tartamaya Xoghaynimo (Secretary) iyo Soo dhaweynta (Receptionist) oo ay soo codsatay Wasaaradda Qorshayntu, Imtixaanka laguma kala bixi doono nasiib iyo garasho, waxa-se lagu kala bixi doonaa dedaal iyo aqoonta uu qofku wato.” Sidaa waxa yidhi Guddoomiyaha Hay’adda Shaqaalaha dawladda Somaliland Nuux Sheekh Muuse Ducaale oo warbaahinta kula hadlay Xarunta hay’adda shaqaalaha ee magaalada Hargeysa markii ay Imtixaanka u fadhiisanayeen 191-ka qof ee labadaa jago u tartamayaa.
Guddoomiyaha hay’adda shaqaalaha dawladda Nuux Sh. Muuse Ducaale waxa uu wax laga xumaado ku tilmaamay in la arko dadka intan leeg ee galaya imtixaankan, maaddaama ay tirada u fadhiisanaysaa imtixaanku ka badan tahay tirada loo baahnaa.
Si kastaba ha ahaatee, Tartankan loo galay labadan boos ee Wasaaradda Qorshaynta ka bannaan ayaa sida Cadceedda oo kale u iftiiminaya heerka shaqo la’aantu ka marayso dalka Jamhuuriyadda Somaliland iyo qorshe la’aanta Xukuumadda Madaxwayne Axmed-Siilaanyo ka leedahay da’yarta Jaamacadaha ka soo baxay oo sannad-ba sannadka ka dambeeya tiradoodu kor u sii kacayso.
Previous articleMuuse Biixi Muxuu ka yidhi Kulanka Dhex-maray Ibraahin-Dhaga-weyne?
Next articleMA QORI YAQAANAAN, MANA AKHRIYI YAQAANAAN AF SOOMAALI